बुलबुल नेपाल | रविको ‘सुमधुर’ आवाजले मोहनी लगायो, आइडल बनाउन साथ दिऔं
रविको ‘सुमधुर’ आवाजले मोहनी लगायो, आइडल बनाउन साथ दिऔं
नेपाल आइडल प्रतिस्पर्धा !
संजिवनी ओझा । मैले नेपाल आइडल हेर्न थालेको यो सिजनदेखि मात्र हुँ । गत सिजन हेर्न पाइन । यसपछाडिका विबिध कारण थिए । अझ भनौं दुर्गममा जागिर भएकाले हेर्न पाइन ।
त्यहाँ टिभिको सुविधा थिएन, भएका घरमा पनि खासै हेर्ने समय पनि मिलेन र रुचि पनि जागेन । यो वर्ष भने म काठमाडौंमा छु । र, मज्जाले नेपाल आइडलको आनन्द लिइरहेकी छु ।
धेरै ‘एपिसोड’ले मेरो मन छोएको छ । खासै टेलिभिजन र युट्युब हेर्न रुचि नराख्ने मलाई नेपाल आइडलले हेर्नेे लत बसालेको छ ।
घरमै बसेर नेपाल आइडलको आनन्दमा भिज्नुको मजा बेग्लै छ । आइडल मन पर्नुको कारण प्रतिस्पर्धीको उत्कृष्ट प्रस्तुति नै हो । मैले सुरुका अंकदेखि नछुटाई हेरिरहेकी छु । धेरै ‘एपिसोड’ले मेरो मन छोएको छ । खासै टेलिभिजन र युट्युब हेर्न रुचि नराख्ने मलाई नेपाल आइडलले हेर्नेे लत बसालेको छ ।
आइडलमा मलाई मन पर्ने प्रतिस्पर्धी रवि ओड हुन् । सुरुवातदेखि नै म उनका प्रस्तुतिलाई असाध्यै नजिकबाट हेरिरहेकी छु । रविले गाएका एकएक गीत मेरो मनमा ताजा छन् । ‘फेवा तालमा साइली’ होस् या ‘अब जाउँला रेलैमा’ उनले गाएका सबै गीतले मेरो मन छोएको छ ।
रविले गाएका एकएक गीत मेरो मनमा ताजा छन् । ‘फेवा तालमा साइली’ होस् या ‘अब जाउँला रेलैमा’ उनले गाएका सबै गीतले मेरो मन छोएको छ ।
मलाई मात्र होइन हजारौं समर्थकलाई पनि उनको आवाज उत्कृष्ट लाग्छ होला । रवि आइडलको ‘टप फाइभ’ मा पुगेका छन् । र, अब उनको आगामी यात्रा सुरक्षित गर्ने जिम्मा तपाई हामीमा छ । यदि हामीले भोट गरे उनको यात्रा दौडिन्छ, नगरे टक्क अडिन्छ । यसकारण अब रविको आइडल यात्रा गन्तव्यमा पुर्याउन सबैले सहयोग अर्थात् भोटमा जोड दिनुपर्छ ।
यो पटकको आइडलको उपाधि रविले नै जित्नेमा एक प्रकारले निश्चित जस्तै भएको छ । तर, ढुक्कका साथ भन्न गाह्रो छ । यो भोटिङको चरण भएकाले जो प्रतिस्पर्धी पनि उपाधि जित्न सक्छ । यदि रविले नै दोस्रो नेपाल आइडलको उपाधि जितोस् भन्ने चाहना छ भने सबैले साथ दिऔं ।
रविबाहेक चार प्रतिस्पर्धी पनि उत्कृष्ट छन् । उनीहरुका आवाज पनि सुमधुर छन् । बिक्रम, सुमित, अमित र अस्मिताका समर्थक पनि रविका जस्तै दिनरात अहोरात्र खटिरहेका छन् ।
आ-आफ्नो ठाउँबाट उनको प्रचारमा जुटौं । सक्दो रविलाई भोट गर्ने तरिका सिकाउँ । अधिकांशलाई अहिले पनि भोट गर्ने तरिकाबारे जानकारी छैन । त्यसकारण सजिलै तरिकाले रविलाई भोट गर्ने जानकारी गराऔं ।
रविबाहेक चार प्रतिस्पर्धी पनि उत्कृष्ट छन् । उनीहरुका आवाज पनि सुमधुर छन् । बिक्रम, सुमित, अमित र अस्मिताका समर्थक पनि रविका जस्तै दिनरात अहोरात्र खटिरहेका छन् । यो पटक सुदूरपश्चिमले नेपाल आइडलको उपाधि जित्ने राम्रो अवसर पनि छ ।
आ-आफ्नो ठाउँबाट उनको प्रचारमा जुटौं । सक्दो रविलाई भोट गर्ने तरिका सिकाउँ । अधिकांशलाई अहिले पनि भोट गर्ने तरिकाबारे जानकारी छैन ।
गत वर्षको सिजनमा यो चरणसम्म यस क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी पुगेका थिएनन् । तर, यो पटक भने रविले सबैको मन जित्दै ‘टप फाइभ’ मा स्थान बनाएका छन् । अब ‘टप फोर’ हुँदै पहिलो स्थानमा पुर्याउन सक्दो साथ दिनुपर्छ ।
रवि भोटले मात्रै होइन आफ्नो क्षमताका कारण पनि यो स्थानमा पुग्न सफल भएका हुन् । अधिकांश एपिसोडमा उनले निर्णायकको मन जितेका छन् । मानिस हो कहिलेकाही केही गल्ति भइहाल्छ, ससाना गल्ति रविमा पनि नभेटिएका होइनन् । तर, ति गल्तिलाई गल्तिको महसुस नगराउने उनका बाँकी प्रस्तुतिले फिक्का पारिदियो ।
आइडलमा आउनुअघि पनि रविले थुप्रै स्टेज तताइसकेका थिए । तर, कमैले मात्र चिनेका थिए । जब आइडलको ‘स्टेज’ पाए अनि वास्तविक रविको परिचय देखाए ।
सुदूरपश्चिम जस्तो पछाडि परेको प्रदेशबाट रवि नेपाल आइडलको ‘उत्कष्ट पाँच’ मा पुग्न त्यस क्षेत्रका लागि गौरवको विषय हो । गत सिजनमा त्यहाँ आइडलमा सहभागी हुने प्रतिस्पर्धी नै छैनन् भन्ने हिसाबले सुदूरपश्चिममा अडिसन नै गरेन । तर, यो पटक भने अडिसन पनि भयो । र, उत्कृष्ट आवाज अर्थात् प्रतिस्पर्धी पनि पायो ।
आइडलमा आउनुअघि पनि रविले थुप्रै स्टेज तताइसकेका थिए । तर, कमैले मात्र चिनेका थिए । जब आइडलको ‘स्टेज’ पाए अनि वास्तविक रविको परिचय देखाए । अझ भनौं आफूभित्रको प्रतिभा संसारलाई चिनाए ।
अब आशा छ उनलै आइडलको उपाधि जितेर आफ्नो र सुदूरपश्चिमको छाती फराकिलो बनाउने छन् । त्यसकारण सबैले रविलाई भोट गरौं । र, उनैलाई दोस्रो नेपाल आइडल चुनौं ।
विश्वका कुनाकन्दरामा नेपाली छन् । जहाँ-जहाँ नेपाली छन्, त्यहाँबाट रविलाई पूर्ण साथ मिलिरहेको छ । एउटा निम्न आर्थिक स्तर पृष्ठभूमि भएको परिवारबाट क्षमता प्रदर्शन गर्दै यहाँसम्मको यात्रा पार गर्दा रविले निकै मिहिनेत गरेका छन् । रत, उनले सफलताको स्वाद पनि चाखिरहेका छन् ।
कयौं प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि छोड्दै यो स्थानमा पुग्नलाई रविको मात्र होइन सिंगो सुदूरपश्चिमको छाती गर्वले फुलेको छ । अब आशा छ उनलै आइडलको उपाधि जितेर आफ्नो र सुदूरपश्चिमको छाती फराकिलो बनाउने छन् । त्यसकारण सबैले रविलाई भोट गरौं । र, उनैलाई दोस्रो नेपाल आइडल चुनौं ।
-रवि नेपाल आइडलको ‘टप ५’ मा उक्लिए, पाए धेरै भोट !
-रविले आज नारायण गोपालको गीत गाउँदै, भोट गर्न सबैलाई अपिल
-‘टप ५’ मा पुग्न रविले राष्ट्रिय गीत गाउने, धुर्मुस–सुन्तली प्रमुख अतिथि !
-चार वर्षअघि पनि रविले यति मीठो गाउँथे ! [भिडियाेसहित]
-रवि नेपाल आइडलको ‘टप ६’ मा पुगे, नीलिमा बाहिरिइन् !
-समर्थकको मायाः रविलाई ‘धनगढी म्युजिकल मेयर’ को उपमा ! [भिडियाेसहित]
-रविले फेरि जिते ‘स्टाइलिस प्रफमर अफ दि डे’ को उपाधि ! [भिडियाेसहित]
-रविको प्रस्तुति दमदार, निर्णायकले उठेर प्रशंसा गरे [भिडियाेसहित]
रवि नेपाल आइडलको ‘टप ७’ मा पुग्न सफल, पाए सर्वाधिक भोट !
-र्‍यापर करिश्माद्वारा रविलाई भोट गर्न अपिल [भिडियोसहित]
-मौलिक पोसाकमा रविले दिए दमदार प्रस्तुति [भिडियोसहित]
समर्थकको साथले रवि उत्साहित, बन्लान् नेपाल आइडल ?
-रवि बने ‘स्टाइलिस प्रफमर अफ दि डे’ [भिडियोसहित]
-पोल खुल्योः रवि ओडका पाँच गर्लफ्रेण्ड ! [भिडियोसहित]
-बिहीबार भोटका लागि प्रतिस्पर्धा नहुने, समर्थकलाई रविले के भने ?
-रवि नेपाल आइडलको ‘उत्कृष्ठ ८’ मा पुग्न सफल, सुविन सिंह बाहिरिए
रवि भन्छन्– नेपाल आइडलमा कसैसँग डर छैन, म पनि खत्रा हो’ [भिडियोसहित]
-रविको नेपाल आइडल यात्रा सुरक्षित, आजको प्रस्तुती झन् दमदार
-आँखा रसाउने रवि वडको विगत [भिडियोसहित]
-नेपाल आइडलः रवि वड ‘टप १०’ का लागि भिड्दै, जान्नुस् भोट गर्ने तरिका
-सुदूरपश्चिमका रवि नेपाल आइडलको ‘टप १०’ पुग्न सफल, प्रस्तुती झन् दमदार !
-रवि नेपाल आइडलको ‘टप ९’ पुग्न सफल, गोल्डेन माइक विजेता मीनराज बाहिरिए ! [भिडियो]
-रवि वड सुदूरपश्चिम जाँदै, विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिने
-रवि वडलाई धनगढीमा भव्य स्वागत
-धनगढी बन्यो रविमय, भव्य स्वागतका लागि र्‍यालीको आयोजना !
-धनगढीमा रविको क्रेज, स्वागतमा र्‍यालीको आयोजना ! [फोटो फिचर]
-सुदूरपश्चिमका रवि वड नेपाल आइडलको ‘टप-११’ मा पुग्न सफल !
-नेपाल आइडलः सुपका एक मात्र प्रतिस्पर्धी रविलाई भोट कसरी गर्ने ? [हेर्नुस्]
-सुदूरपश्चिमका रवि वड नेपाल आइडलको ‘टप-१०’ नजिक, उपाधि जित्ने सम्भावना कति ? [भिडियाे]
-प्रदेश सातबाट नेपाल आइडलमा रबि वड मात्र, उपाधि जित्न सक्लान् ?
-धनगढी अडिसनबाट ‘गोल्डेन टिकट’ पाउन सफल प्रतिस्पर्धी को-को ? [नामसहित]
सोमबार, १७ मङि्सर २०७५ मा प्रकाशित
Tags : #Ravi Oad #Nepal Idol
‘समाज परिवर्तनका लागि रिस होइन एकता बनाऔं’
गाउँमा बढेको बालविवाहले हैरान भए !
शिक्षक आफैं नलागे स्कुल सुध्रँदैन
दरिद्र दिमागले कलाको गला नथिचियोस्
कहाँ गए पूराना देउडा गायक ?